FIQI Waxay Raaligalin Siineysaa 'halgamayaashii Shirkole' » Axadle Wararka Maanta
FIQI waxay raaligalin siineysaa ‘halgamayaashii Shirkole’
Muqdisho (Axadle) – Wasiirka Amniga Dowlad Gobaleedka Galmudug Axmed Macalin Fiqi oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka ayaa raali galin ka bixiyay hadalo ka soo yeeray xildhibaano xalay shir jaraa’id ku qabtay waxayna weerareen xildhibaanada Shirkole ee taageersan Saadaq John.
Waxaa soo abaabulay Villa Somalia, oo ka soo jeeda beesha Habargidir, Fiqi wuxuu ku tilmaamay xildhibaanada inay yihiin “la haystayaal aan xor u aheyn inay fikirkooda dhiibtaan” kuna hadla luqad aan iyaga aheyn.
Dagaalyahanada Shirkole waxay ka raaligalinayaan xildhibaanada kale in aysan siin taakuleyntii ay u baahnaayeen markii ay ciidamada joogeen, intaasna kuma koobneyn, ”ayuu u sheegay Sabahi.
“Dad ka yimid Shirkole, waxaad mudan tihiin inaad la wadaagtaan xaaladdii adkayd ee aad habeenki dhaweyd guriga ku keentay, ama ugu yaraan waxaad mudan tihiin inaad ka murugooto hurdo la’aantaada, welwelkaaga iyo cabsidaada, haddii aysan taasi dhicin, waxaad mudan tahay qof daacad ah salaadda.
Wuxuu sidoo kale kula dardaarmay xildhibaanada ay soo dirtay Villa Somalia inay raali galin ka bixiyaan hadalkii shalay ee ka dhanka ahaa halganka socda kana fogaadaan falalka noocan oo kale ah ee lagu taageerayo dowlada Farmaajo.
“Waxaa la go’aamiyay waqti aan fogayn ka dib weerarkii Shirkole ee shir jaraa’id in xildhibaano dhowr ah ay isku dayeen inay cadeeyaan eedeymahooda, kuna hadlaan luuqad aan ka aheyn oo ay ku qaldamaan dhinaca bini’aadamnimada ayna difaacaan nidaamka. Villa Soomaaliya.”
Xildhibaanada ay weerartay Villa Somalia waxaa kamid ah; Ubax Tahliil Warsame, Warsame Joodax iyo Cabdikariim Khaliif Dhalac.
Taageeradu waxay sii xoojisay kacdoonkii looga soo horjeeday deeqda Madaxweyne Looga Tagey muddo laba sano ah waxayna sii ahaan doontaa tabaruc sharci darro ah oo lagu helo awoodda, “Walaalayaal raali ahow, ha raacina isla halgankuna, garabkiina ayaa leh.”